शालिकरामलाई सम्झदै रविले भने–‘साहसी र आत्मविश्वास भएको सञ्चारकर्मी थिए’ « News24 : Premium News Channel
स्तब्ध छु आज । यस कार्यक्रमका लागि अहोरात्र खट्ने कार्यक्रमको यो उचाइमा सहयात्री बनेका एक होनहार पत्रकार शालिकराम पुडासैनी चितवन, नारायणघाटको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन् । आफ्नो एक निकट पूर्व सहकर्मीको मृत्युको खबर पढ्न कति कठिन हुन्छ ।
तर, प्रिय साथी तिम्रो शाहस, आँट र आत्मविश्वास यो कार्यक्रमको अस्तित्व रहेसम्म जीवित रहन्छ । केही सिकेर, जानेर पाएको अवसर छोडेर यतै बस भन्न सकेको भए सायद यो दिन आउदैन थियो कि ! तर, उन्नति र प्रगति गर्ने अवसर पाएका साथीलाई खुम्च्याएर राख्ने अपराध गर्न सकिएन ।
त्यसैले पनि फैलिएर हाम्रो टिमको सदस्य अर्को संचारगृहमा अझै राम्रो अवसर प्राप्त गरेर जाँदा यो समाज अझै लाभान्वित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै हामीले आफ्नो एक ज्यादै महत्वपूर्ण सदस्यको विदाई भारी मनले गरेका थियौ तर, २ महिनापनि नवित्दै समाचार लिएर आउने साथी आँफै समाचारको शिर्षक बने । र, यो स्टुडियोमा यसरी उभिएर आफ्नै पूर्व सहकर्मीको मृत्युको खबर सुनाउनु पर्ने दुर्भाग्य मेरो भागमा प¥यो । आज विहान चितवनका टिभी जर्नलिष्टलाई आफ्नै पूर्व सदस्यको मृत्यु शंकास्पद भएकाले गएर फलोअप गर्नु भनि अह्राउँदाको अनुभव ज्यादै गरुङ्ह्रो छ ।
मध्यरातमा प्रहरीको लात्ति, ठग, गुण्डाको धम्कीसँग रत्तिभर नडराएका मान्छेले आत्महत्या ग¥यो होला भन्ने मान्न यो मनले कसरी सक्ला र ? यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने पनि तिमीलाई आत्महत्या गर्न विवश पार्ने, घटना, व्यक्ति वा परिस्थितिबारे खबर लिएरै छाड्छौं ।